Somali text - Ny skolenhetsorganisation - Göteborgs Stad
Start / Film / Somali text
Film translation somali
— Sidaan bay isku beddelayaan dugsiyada hoose dhexe ku yaal Göteborg.
— Inta lagu gudo jiro 2021 waxay Göteborgs Stad isbeddel ku samayn doontaa siday u abaabulan yihiin dugsiyadeeda hoose dhexe.
— Maamulka dugsiyada hoose dhexe waxay fulinayaan Isbeddello dhowr waji oo kala duwan maraya.
— Wajiga koowaad haddaba waa la dhammeeyay.
— Laga bilaabo 1 jeenawari iskuul kasta wuxuu ka tirsanaan doonaa wax cusub oo loogu yeero aagga waxbarasho – oo la raacayo sida loo qaybiyay aagaga (waaxaha) cusub ee Göteborgs Stad (degmada Göteborg): Centrum, Hisingen, Nordost iyo Sydväst.
— Wajiga ku xiga wuxuu bilaabanayaa markii sannad dugsiyeedku bilowdo agosto gudaheeda 2021.
— Taasi waxay la micne tahay inaan isbeddel ku samaynano maamulka iyo hoggaanka dugsiyada.
— Dugsiyada hoose dhexe waxay horay uga koobnaayeen iskuullo kala duwan marka laga hadlayo, waynaanta, fasallada, siday u abaabulan yihiin iwm.
— Taasi waxay keentay inay duruufuhu kala duwanaayeen marka laga hadlayo ardayda iyo shaqaalaha iskuulka labadaba.
— Qaabka cusub oo ay u abaabulan yihiin iskuullada degmada waxay ka dhigaysaa iskuullada kuwo ka waawayn oo ka tiro yar sidii hore.
— Waxaan isku daraynaa iskuullada isku cinwaanka ah oo ka dhigaynaa hal iskuul.
— Dhammaan iskuullada waxay ka tirsan yihiin waxa loogu yeero aagga iskuulka.
— Aagaga iskuullada waxay ka kooban yihiin hal ama dhowr iskuul oo waxaa ka dhaxaynaya hal maamule iskuul iyo hoggaanka iskuulka.
— Isbedelladu waxay sidoo kale quseeyaan dugsiga hoose dhexe ee ardayda baahida gaarka ah leh, oo badanaa hal iskuul ka tirsanaan doona.
— Fasallada dugsiga hoose dhexe ee ardayda baahida gaarka ah leh wax isbeddel ah laguma samayn doono,
waxay u jiri doonaan sidii hore.
— Dhowr dugsiyo hoose dhexe oo loogu talogalay ardayda baahida gaarka ah way sii jiri doonaan si aan u hubsanno in ardayda baahida gaarka ah ee wayn u qaba caawinaad ay u helaan.
— Waxaan sidoo kale wax ka beddel ku samaynanaa siduu u abaabulan yahay shaqaalaha caafimaadka ardayda–
– Waxaa laga wadaa kalkaalisooyinka iskuulka, la taliyaha ardayda, qofka cilmi nafsiga bartay ee iskuulka ka shaqeeya iyo macalin ku takhasusay waxbaridda ardayda.
— Waxaan samaynanaa isbeddello si shaqaalaha caafimaadka ardayda qaabilsan u noqdaan kuwo la heli karo intii suurtagal ah – oo ay qayb uga noqdaan hawlaha looga hortagayo caafimaad darrada iyo inay ardaydu helaan bey´ad fiican oo ay wax ku bartaan.
— Ujeedada laga leeyahay isbeddellada waxaa ka mid ah in iskuuullada isku darkoodu sii xoojiyo oo ay fursad dheeri ah u helaan inay haqabtiraan baahiyaasha kala duwan ee ay ardaydu u qabaan caawinaad oo caawinaadda la siiyo cidda ugu baahida badan.
— Shaqaalaha iskuulka waxay fursad fiican u helayaan inay wax kala bartaan oo si wadajir ah u horumariyaan oo u wanaajiyaan waxbaridda.
— Ardayda baahida u qaba caawinaad dheeri ah oo laga siiyo dhanka waxbarashada – waxay caawinaad dheeri ah ku heli doonaan
— Iskuullada ay dhigtaan iyo meelo u dhow.
— Ardayda waxaa loo jeexayaa waddo cad si ay iskuulka marxaladihiisa kala duwan si kalsooni iyo sii saadaalin leh uga ba xaan.
— Waxay isbeddelladaan mustaqbalka abuuri doonaan fursado –
– Dugsi hoose dhexe loo siman yahayoo tayadiisu sarrayso looguna talogalay dhammaan ardayda.
— Ardayda dhigata dugsiyada hoose dhexe waxbarashadu waxay ugu socon doontaa sidii caadiga ahayd.
— Laakiin qaabka cusub ee iskuulku u abaabulan yahay ardaydu uma baahan doonaan inay iskuulka beddeshaan sannadka dhammaadkiisa sidii hore oo kale.
— Dhowr baa maamule iskuul oo cusub heli doona al ama ka badan kaaliyeyaal maamule oo cusub laga bilaabo xilli dugsiyeedka deyrta 2021.
— Si wadajir ah baan wadada ugu xaaraynaa iskuulka mustaqbalka!
Waxaad wixii intaa dheer oo ku saabsan qaab maamulka cusub kasii akhrin kartaa –
— Tani waxay ahayd warbixin ka timid Göteborgs Stad.